Daawo: Xukun ay Maxkamada Gobolka Banaadir ku ridey eedaysanayaal uu ku jiro Milkiilaha Radio Shabeele | idalenews.com
Home Idale Somali News Update Daawo: Xukun ay Maxkamada Gobolka Banaadir ku ridey eedaysanayaal uu ku jiro...
Idale News Online “INO”, December 08, 2013: Maxkamada Gobolka Banaadir ayaa maanta xukun hal sano ah ku riday Milkiilaha Idaacada Shabelle C/maalik Yuusuf Maxamuud oo lagu soo eedeeyay aflagaado ka dhan ah madaxda qaranka, iyadoo wariyihii wareystay haweeney sheegatay in la kufsaday ku xukuntay lix bilood oo xabsi ah.
Maxkamada ayaa waxay lix bilood oo dibad joog ah ku xukuntay Gabadhii sheegatay in la kufsaday oo lagu magacaabo Faadumo C/qaadir, kadib markii Maxkamada ay sheegtay in arrinta kufsiga ay aheyd mid la been abuuray.
Waxaa Maxkamada horteeda laga hor aqriyay baaritaanadii la xiriiray kufsiga, waxaana warqad laga keenay Isbitaalka lagu cadeeyay in aan la kufsan gabadha.
Milkiilaha Idaacada Shabelle ayaa lagu soo eedeeyay in uusan aqoonsaneyn qaranimada Soomaaliya, isla markaana warbaahintiisa uu adeegsado falal ka dhan ah qaranimada, iyadoo website Idaacada la sheegay in lagu aflagaadeeyay Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka C/kariin Xuseen Guuleed.
Kiiska la xiriiray kufsiga ayaa xeer ilaalintaa sheegtay in la been abuuray, waxaana Maxkamada la horkeenay cadeymo kala duwan iyo marqaatiyeyaal, iyadoo ugu dambeyn soo afjartay kiiskan ku saabsanaa kufsiga.
Xukunadan lagu riday Milkiilaha Shabelle iyo Wariye Maxamed Bashiir ayay Maxkamada sheegtay in la iibsan karo, iyadoo maalintii ay bixinayaan lacag dhan labaatan kun shilinga Soomaali lagu iibsan karo.
Previous articleXildhibaan ka tirsan barlamaanka oo rajo weyn laga qabo in loo magacaabo xilka Ra’iisul Wasaaraha
Next articleDaawo: Go’aankii Tarzan oo ka careysiiyey Milkiilayaasha Guryaha burbursan “Kii Shaley dumiyey Maanta waan qaadanaa ka yeeli meyno”